Endritsoratra maoderina 7 sy ny fomba fampifangaroana azy ireo amin'ny volavolanao | Famoronana an-tserasera
Endritsoratra maoderina 7 sy ny fomba fampifangaroana azy ireo amin'ny volavolanao
Lola curiel | | maro
Tsy fantatro raha toa ka izany no mitranga aminao, fa rehefa asaina manao asa aho na rehefa mila mamorona zavatra, iray amin'ireo fanapahan-kevitra voalohany noforoniko tiako hatao dia ny endritsoratra ampiasaina. Mba hanaovana izany dia mandeha matetika amin'ny Google Fonts aho, ny banky typographic, ary afaka mandany adiny iray aho mitady izay mety indrindra.
Misy endritsoratra an'arivony sy an'arivony, ary tsy mora foana ny manambatra azy. Ka tamin'ny farany dia nisafidy ny hanao lisitry ny endri-tsoratra tiako aho sy ireo endritsoratra izay miaraka tsara. Ny fitambaran-typeface ratsy dia mety hanimba endrika.
Mba hanomezana aingam-panahy anao dia hizara ity ampahany amin'ny lisitra nataoko ity aho, holazaiko anao izay ny endritsoratra maoderina 7 tiako indrindra ary inona no ampiasako azy ireo, ankoatr'izay, Homeko anao miaraka amina endritsoratra ireto ianao izany sisa tavela amin'ny tantara ratsy. Fa alohan'ny hidirantsika amin'ilay lohahevitra dia ndao hofaritana hoe inona ny endritsoratra na endritsoratra maoderina.
1 Inona ny endritsoratra maoderina?
1.1 Volavola maoderina sy endrika maoderina
2 Ireo mari-tsoratra maoderina tiako indrindra 7 sy ny fomba fanambatra azy ireo
2.1.1 Side mahazatra
2.1.2 Lato Bold sy Lato Black
2.3 File Black
2.4 Misotroa Neue
2.5 izao rehetra izao
Inona ny endritsoratra maoderina?
Mifanohitra amin'izany fa raha miresaka momba ny endritsoratra maoderina isika dia tsy endritsoratra «vaovao» no resahina fa kosa ireo typefaces noforonina tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX izay, aingam-panahy avy amina endrika maoderina, dia nanamarika ny teo aloha sy taorian'ilay tantaran'ny famolavolana typographic. Moa karazana azo vakina sy madio tokoa. Misy azy ireo miaraka na tsy misy serifs, fa amin'ny lafiny roa, miaraka amin'ny haingon-trano bebe kokoa na kely kokoa, ny fahazoana mivezivezy dia tsy sorona ho an'ny hatsarana. Ankehitriny, ny typefaces maoderina dia tena eo amin'ny famolavolana tranonkala.
Volavola maoderina sy endrika maoderina
Alohan'ny hanohizana dia heveriko fa tokony hahatadidy izany isika Ny famolavolana sary maoderina dia tsy mitovy amin'ny endrika sary mifototra amin'ny maoderina na Art Nouveau. Art Nouveau dia hetsika ara-javakanto izay natao tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-XNUMX sy ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, niavaka tamin'ny firavahany sy ny fitaomam-panahy avy amin'ny natiora. Nisy fiatraikany lehibe tamin'ny famolavolana sary, ny mpamorona toa an'i Alphonse Manya dia ao anatin'io fironana io.
Fa… Inona no tiana holazaina rehefa miresaka momba ny endrika maoderina? Ary koa, tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, ny mila manamora sy manadio endrika hahatonga azy ireo hiasa bebe kokoa. Ny mpamorona sasany dia nisafidy ny hanafaka ny sombin'izy ireo tamin'ny artifice, naka fomba tsotra kokoa. Tokony hitady ireo antecedents ao amin'ny Sekolin'i Bauhaus izany, eo ambanin'ny teny filamatra "endrika manaraka ny asany", nohavaozina ny fototry ny famolavolana saryo.
Ireo endri-javatra rehetra ireo izay noresahinay momba ny endrika maoderina dia azo omena ihany koa amin'ny famolavolana karazana. Raha ny tenin'ny mpandinika an-tsoratra Douglas McMurtrie, "ny lahasa voalohany amin'ny typografia dia ny mampita hafatra amin'ny fomba izay takatry ny mpamaky azy." Noho izany, ny famolavolana typografika dia hanaiky ity fiasan'ny endritsoratra ity mba hampifanaraka ny endriny aminy. Ny typografia maoderina dia miavaka amin'ny fikarakarana ny fahamendrehana Ambonin'izany rehetra izany.
Ireo mari-tsoratra maoderina tiako indrindra 7 sy ny fomba fanambatra azy ireo
I Lato dia fiankinan-damaisa noforonina tamin'ny taona 2010 avy amin'ilay mpanao typographer poloney Lukasz Dziedzic. Ny fianakaviana Lato nanjary iray amin'ireo be mpampiasa indrindra amin'ny famolavolana tranonkala, maimaim-poana ary ahitana fomba fanoratra 18.
Ny tena tiako indrindra amin'ny Lato Regular dia ny fahaizany mamorona, Izy io dia loharano tena tsy miandany, hazo maina ary mety amin'ny ankamaroan'ny karazana tetikasa izy io. Raha ny mahazatra dia ampiasaiko ho an'ny vatan'ny lahatsoratra ary, toy ny amin'ity karazana karazana ity, dia tena mandaitra ny mifanohitra, Matetika aho no miaraka amina taratasy misy serif sy miolakolaka. Mizarako aminareo roa mitambatra izay ampiasaiko matetika.
Lato Bold sy Lato Black
Ireo fomba fianakavian'i Lato ireo dia safidy tsara ho an'ny lohateninao sy lahatsoratra avo lenta. Tiako ny mampiasa karazan-kazo matevina matevina, toa an'i Lato Bold, ho an'ny lohateny sy araho miaraka amina endriny serif tena tsaratoa ny Jiro Merriweather. Ity kombina ity dia toa baomba ho ahy.
Tamin'ny voalohany dia tsy sahy nanambatra endritsoratra avy amin'ny fianakaviana iray ihany aho. Na izany aza, zavatra iray izay, raha vita tsara, milalao amin'ny mifanohitra amin'ny hateviny sy ny habeny, mety io. Atambatra, ohatra, ny Lato Black sy ny Lato Light, Hitako fa mahaliana.
Ny fianakavian'i Futura, izay vita tamin'ny endrika sans-serif, dia noforonin'i Paul Renner tamin'ny 1927, iray amin'ireo mpamolavola sary sy mpanao milozofa manan-danja indrindra amin'ny tantara. Miankina amin'ny endrika geometrika ary mifanaraka amin'ny fomban'ny Bauhaus, ity fianakaviana typeface ity dia mbola iray amin'ireo be mpampiasa indrindra. Hatramin'izay ny orinasa sy orinasa fanta-daza toa ny IKEA, Volkswagen ary na ny NASA aza dia nampiasa azy io tamin'ny fotoana sasany tamin'ny volavolan-dry zareo. Raha tianao fitambarana kanto sy manintona, Mamporisika anao aho hiezaka ny hampiasa ilay Bodoni sahy, serif typeface izay hitovy amin'ny sary famantarana ny magazine Vogue, eo akaikin'ny Mediura Medium ho an'ny lahatsoratra ambaratongam-pahefana ambany.
Black Archive dia endritsoratra sans serif avy amin'ny Omnibus-Type, mpaninjara endri-tsoratra izay manome fonosana maimaimpoana sy maimaim-poana ho an'ny mpampiasa. Ny tena tiako indrindra amin'ity endri-tsoratra ity dia izany miasa tsara amin'ny taratasy sy tranonkala. Noho izany, raha mitady endritsoratra ho an'ny tetikasa novolavolaina miaraka amin'ireto haino aman-jery roa ireto ianao, ity font ity dia mety ho safidy mety. Matetika, Matetika aho tsy manambatra endritsoratra izay mitovy, fanapahan-kevitra mampidi-doza loatra izany. Na izany aza, tsy maintsy ekeko fa tiako be ny fampifangaroana ny Rakitra mainty ho an'ny lohateny miaraka amin'ny Montserrat ho an'ny vatan'ny lahatsoratraNa, raha ny fijeriko azy dia mandeha izy.
Ity typeface ity dia iray amin'ireo ampiasaiko indrindra amin'ny lohateny lehibe. Noforonin'ny mpamorona japoney Ryoichi Tsunekawa, dia endritsoratra iray io miavaka noho ny endriny lavalava sy ny fahatsorany. Ny hany lesoka hitako dia izany manana litera lehibe ihany, ka tsy ho azonao ampiasaina amin'ny vatan-tsoratra, Natao ho an'ny fehezanteny fohy, lohateny lehibe, teny filamatra… Na izany aza, samy manana ny fomba fanaony ny fianakaviana ary tena mahomby amin'ny lafiny rehetra, sarotra ny manambatra azy tsara, tsara tarehy miaraka amina endrits tena hafa, avy amin'ny endritsoratra serif, toy ny Georgia, ho an'ny sans serif typefaces, toy ny Fahazavana Montserrat.
Bebas Neue + Georgia
Misotroa Neue + Jiro Montserrat
Ity fianakaviana typeface mahafinaritra ity dia noforonin'i Swiss Adrian Frutiger tamin'ny 1957. Iray amin'izany endritsoratra teraka tamin'ny sehatry ny fanavaozana ny fomba fanoratra ary ny fanombanana ny sans serif typefaces. Nanjary fantatry ny olona tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX.
The Univers Izany dia typeface geometrika madio, manana fanatrehana betsaka, noho izany dia tena izy safidy tsara ho an'ny lohateninao ary mifangaro volo tsara amin'ny endriny serif mahazatra toa an'ireo mifototra amin'ny Caslon na la Baskerville.
Helvetica dia iray amin'ireo fianakaviana typeface izay niseho tamin'ny taonjato faha-XNUMX hijanona eo amin'ny fiainantsika. Izy io dia noforonina tamin'ny taona 1957 avy amin'ny mpandika sary Max Miedinger sy Eduard Hoffman amin'ny anaran'ny mpampiorina an'i Hass, izay nitady ny fanavaozana ny endriny sans-serif.
Androany dia mitohy ho iray amin'ireo endritsoratra be mpampiasa indrindra ireo matihanina amin'ny famolavolana sary. Marika lehibe toa an'i Jeep, Toyota na Panasonic no nampiasa Helvetica tamin'ny sary famantarana azy ireo.
Izany dia fianakaviana typeface tena marobe, sans serif ary boribory. Manana fomba maro amin'ny lanjany isan-karazany izy, noho izany ny fampiasana azy dia tena marobe. Ny fifangaroana izay ampiasako betsaka dia Helvetica, ho an'ny lohateny lehibe, miaraka amin'ny Garamond, ho an'ny soratra amin'ny vatana.
Hakatoko ny lisitry ny endritsoratra maoderina 7 miaraka amin'ny Roboto. Noforonina ho an'i Google ity fianakaviana fonosana sans serif ity avy amin'ny mpamorona interface Christian Robertson, ho loharanon'ny rafitra fiasa Android 4.0. Ny tiako indrindra amin'ny Roboto dia ny azy legibility ary inona no atao hoe a somary mora ny manambatra typography. Ho fanampin'izay, izy dia iray amin'ireo endritsoratra be mpampiasa indrindra amin'ny Internet, noho izany, manatrika tranokala marobe, manome antsika fahatsapana mahazatra Mety hilalao antsika io raha ampiharintsika amin'ny volavolaintsika izany. Atambaro ny endritsoratra sans-serif toa an'i Roboto amin'ny fomba chunky miaraka amin'ny typeface serif toy ny Rockwell Heveriko fa fahombiazana lehibe izany.
Tadidio izany ny lisitry ny endritsoratra maoderina 7 atolotray anao sy ireo fambara momba ny fanakambanana azy ireo dia sosokevitra vitsivitsy fotsiny izany dia afaka manome aingam-panahy. Ny safidy sy ny fitambaran-tsoratra asa mila fitiliana sy fanandramana izany, mandra-pahitanao loharano izay mirindra tsara. Araka izany, manoro hevitra anao aho mba hanandramanao ary hitady ireo fitambarana izay ilaina indrindra, manokana ary mety amin'ny tetikasanao. Mampiasà fitsipika tsotra, mitadiava fifanoherana, araho ny ambaratongan'ny lahatsoratra, tandremo ny fahamendrehana ary, ambonin'izany rehetra izany, mamoaka ny eritreritrao hamoronana endrika tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Endritsoratra maoderina 7 sy ny fomba fampifangaroana azy ireo amin'ny volavolanao
Lahatsoratra tena tsara !!! Zava-dehibe koa ny manampy ho antsika, ny miteny espaniola, ny misafidy endritsoratra izay manana ny litera ilaintsika, indrindra ny tíldes sy eñes ... nitranga tamiko io fa tsy indray mandeha aho no misafidy iray izay tsy manana azy ireo ary avy eo tsy maintsy miverina aho fa tsy hitako!
Valiny amin'i LORENA
Lola curiel dia hoy izy:
Misaotra anao tamin'ny hevitra nataonao Lorena. Mariho tsara ny zavatra ataonao, efa nanjo antsika rehetra izany indraindray dia manome fahatezerana be!
Valiny tamin'i Lola Curiel
Adobe Lightroom dia lasa fampiharana teratany ho an'ny Apple M1 sy Windows 10 amin'ny ARM
Mpanao sary espaniola